Nangina nandritra ny 3 taona: hanamarika ny fiverenany i Onja | NewsMada
Nangina nandritra ny 3 taona: hanamarika ny fiverenany i Onja
Niato kely naka bahana i Onja. Efa manomana ny taom-pampisehoana 2020 izy sy ny ekipany ka hisantatra izany, ato ho ato.
Elaela no tsy nahatazanana na nandrenesana firy an’i Onja Tinondia. Nisy ihany fotoana nahenoana azy, saingy tsy teo amin’ny lafiny zavakanto fa ny fahasoavana niditra taminy, dia ny niterahany ny zanany kambana, ny volana avrily lasa teo. Noho izay antony izay indrindra no namelany kely ny mozika, nandritra ny volana vitsivitsy. Na izany aza, tsy niala tanteraka tamin’ny zavakanto fa niezaka nandrindra izany hifanaraka amin’ny fiainany manokana ihany i Onja.
Porofon’izany, vita ary efa nivoaka ny rakitsary roa “Sambatra” sy “Dansez-dansez”. Entin’ity mpanakanto ity hanamarihana ny fiverenany rahateo izany, rehefa avy niato kely 3 taona teo ho eo. “Tsy maintsy nalamina ny fandaharam-potoana amin’ny maha renim-pianakaviana, kanefa tsy natao sakana amin’ny asa izany”, hoy i Onja. Araka ny fanazavany hatrany, tantaram-pitiavana mifototra indrindra amin’izay ilay hira “Sambatra”. “Rehefa tsy manana olana eo amin’ny fiarahamonina dia efa sambatra”, hoy ihany izy.
Tamin’ny niteraka ny zanany voalohany dia efa nanome toky ireo mpankafy azy i Onja fa handrindra araka izay azony atao ny fandaharam-potoany. Tsy nitsahatra namoron-kira izy sy ny ekipany, na dia tamin’ny fotoana niompanany tamin’ny fitaizana ny zanany aza. Fantatra fa misy vokatra maromaro ireo vaovao, izay havoaka tsikelikely amin’izay, ato ho ato.
Ho fisantarana ny fiverenan’ny tarika Onja an-tsehatra, anisan’ireo hanafana ny “Reveillon” etsy amin’ny A&C Ivato izy ireo. Mampanantena i Onja fa tsy misy miova ary vao mainka hafana ny fiarahana, noho izay fakana bahana elaela izay. Tsy miandry ela fa tonga dia hanomboka ny taom-pampisehoana ny tarika, ny 14 febroary andron’ny mpifankatia, ao amin’ny Le Glacier Analakely.